RAKOTOBE MPAKA SARY Manankarena tahiry tsy tontan’ny ela - ewa.mg
RAKOTOBE MPAKA SARY Manankarena tahiry tsy tontan’ny ela
News - RAKOTOBE MPAKA SARY Manankarena tahiry tsy tontan’ny ela
Manatanteraka fampisehona mivelatra etsy amin’ny CMDELAC Analakely nanomboka omaly talata 16 Aprily 2019 ka hatramin’ny sabotsy 20 Aprily 2019 momban’ny sary sy gazety voatahiriny i Rakotobe Michel, mpaka sary an-gazety fantatra amin’ny anarana hoe Rakotobe. Hita mandritra io hetsika karakarainy io ireo tahirin-tsary tamin’ny fankalazana ny 29 Martsa nanomboka tamin’ny repoblika faharoa ka hatramin’ny tapan’ny repoblika fahaefatra. Misy santionan’ny zavatra nitranga tamin’ny 29 martsa 1947 ihany koa amin’io fampiarantiana io. Ao ireo gazety maro isan-karazany. « Tsy mora ny mitahiry antontan-kevitra na sary izany na gazety an-tsoratra kanefa rehefa eo ny finiavana dia mitady ny hevitra rehetra hanaovana izany ».
Tanjona ny hampafantarana ny Malagasy rehetra ny fomba fankalazana ny 29 martsa izany sy ny fivoarany nandritra ireo taona nifandimby. « Nandany vola mihitsy aho nividianana ireo gazety ireo teny amin’ny fivarotam-boky Ambohijatovo satria tsy tiako ho lasan’ny vahiny ny fananan’ny Malagasy.
Antsika ireo ka tokony isika ihany no mitahiry azy », hoy ity paka sary an-gazety ao amin’ny tia tanindrazana ity. Santionany amin’ireo tahirin-kevitra ananany ihany anefa ireo am-pirantina ireo fa efa manodidina ny 500 ireo tahirin-kevitra ananany ankoatra ireo « pelicule ». 13 taona izy no efa nanomboka tia naka sary ka ireo mpiara-mianatra aminy no nalainy sary.
Ny taona 1980 kosa izy no nanomboka naka sary an-gazety, toy ny gazety Midi, Gazetiko, Tribune, Vaovaontsika. Efa nampiasa ireo fakantsary rehetra nisy hatrizay izy, teo ny fankatsary « plastique, 12 pause », fankatsary « demi format », 36 pause lasa 72 pause ny taona 1991 izay nazahoany tahirin-tsary betsaka. « Faniriko ny ahazo fitaovana raitra misy ankehitriny fa saingy ny fahefana mividy no olana ».
Cet article RAKOTOBE MPAKA SARY Manankarena tahiry tsy tontan’ny ela est apparu en premier sur déliremadagascar.
Kolontsaina - Rakotobe mpaka sary
Voarafitra tamin’ny fiatombohan’ity herinandro ity ny fandaharam-potoanan’ny Kempo Madagasikara ho amin’ny taona 2019. Hosokafana amin’ny dingana voalohany, amin’ny fifampizarana sy fanomezana fiofanana ireo mpitarika mpanampy, rahampitso 8 desambra ho avy izao izany, raha ny tatitra nataon’ny filohan’ny komity mpitantana ny Kempo sy ny MMA (Mixed Martial Arts) eto Madagasikara. Hitohy any Ambositra, ny 21 sy 22 desambra izao izany fampiofanana izany. Ity farany izay fanombohana amin’ny fampidirana ny Kempo sy MMA any amin’ny faritra Ambositra iny. Ankoatra an’Ambositra, efa maro ireo faritra mangataka fiaraha-miasa amin’ny fifampizarana toy izao, toa an’i Vaingaindrano sy Farafangana. Hiditra amin’ny dingana faharoa amin’ny fampiofanana ireo mpitarika mpanampy ny volana febroary 2019.Ho an’ny mpitarika, fiofanana roa no hatrehin’izy ireo, ny taona 2019, dia ny volana mey sy ny volana jiona. Hisy ny fitsapam-pahaizana hatao ao aorian’ny fampiofanana izay omen’ny manam-pahaizana. Eo amin’ny lafiny fifaninanana kosa indray, ny lalao eo amin’ny samy klioba, mivondrona sy mitsangana eo anivon’ny komity mpitantana no hisantarana ny fandaharam-potoana. Izany dia hotontosaina ny faha-29 ny volana desambra izao. Aorian’izay, hiditra amin’ny fifaninanana hiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, kempo sy MMA, ireo mpikatroka, ny faran’ny volana martsa 2019. Fa anisan’ny ady goavana hatrehan’ny mpikatroka malagasy amin’ity taom-pilalaovana 2019 ity ihany koa ny fifaninana iraisam-pirenena. Handray anjara amin’ny fiadiana ny tompondaka manerantany amin’ny taranja Kempo hotontosaina any Madrid, ny volana aprily 2019, mantsy i Madagasikara. Fanamby goavana apetraky ny komity mpitantana ny kempo sy MMA eto an-toerana ny fiatrehana ity fifaninanana lehibe ity ary antenaina fa hitondra fivoarana eo amin’ny taranja Kempo eto Madagasikara. Efa manomboka hita ihany koa ankehitriny ny fitomboan’ny traikefan’ireo mpikatroka malagasy. Mazoto manatrika ny fampiofanana karakarain’ny komity mpitantana rahateo izy ireo ka vetivety dia mahita fivoarana, raha ny fanazavana nentin’ny filohan’ny komity mpitantana, Rakotonindriana Parfait. Mi.RazL’article Kempo – Taom-pilalaovana 2019: hanomboka rahampitso ny fiofanana a été récupéré chez Newsmada.
Hetsiky ny olom-pirenena: « Ovana ny Ceni sy ny HCC…”
Niray feo ary nilaza ny tsy hanaiky hatramin’ny farany. “ Tsy tokony hirosoana aloha ny fifidianana Ben’ny Tanàna raha tsy milamina ny fanoloana ny mpikambana rehetra ao amin’ny Ceni sy ny ratsa-mangaika, ny fokontany, ny distrika, ny kaominina nikirakira ny fifidianana sy ny HCC”, hoy ny Hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny hosoka sy hala-bato (Hom3HF), tetsy Anosy, omaly. Nohitsin’izy ireo fa tompon’andraikitra tamin’ny tsy fahatomombanan’ny fifidianana rehetra natao teto ireo ary tsy afa-bela amin’ny halabato niseho koa. Anisan’ny nitarika izany ny sasany amin’ireo kandidà tsy lany sy ireo mpanao politika sasany, toy ny pasitera Tsarahame Edouard, ny Dr Razafindrakoto Harison, i Ninie Donia na koa ry Riri be. Nanatrika izany kosa ny maro amin’ireo depiote Tim, voafidy farany teo. Ankoatra izany, nanterin’izy ireo fa tokony ovana ny lalàna mifehy ny fifidianana. “Mba isian’ny fifidianana madio, mangaraharaha ary eken’ny rehetra ny anton’izany. Tsy tokony ho afa-bela koa ireo nandika lalàna sy nanao fahadisoana. Aoka isika olom-pirenena mba hitsangana hatramin’ny farany ary hanohitra ny halabato sy ny hosoka”, hoy ihany izy ireo. Notsindrin’ireto mpanao politika ireto fa tsy hisy firenena vanona eto raha ohatra ka olona lany tamin’ny halabato no hitondra sy ny firenena sy ny faritra.Synèse R.L’article Hetsiky ny olom-pirenena: « Ovana ny Ceni sy ny HCC…” a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Fifidianana filohan’ny federasiona: manjaka ny resa-bola sy ny teritery
Hanomboka, ny alakamisy 8 aogositra ho avy izao, ny fampielezan-kevitra hifidianana ny ho filohan’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Samy handresy lahatra ireo filohan’ny ligy miisa 22 ireo kandidà dimy mirahalahy, amin’ny tetikasa hoentiny, hanatsarana ny baolina kitra.Amin’izao fotoana izao, efa mandeha sahady ny ady tsy fiady fanaon’ireo kandidà sasany, amin’ny fampiasana vola. Tsy ny fanaovana izany anefa no ratsy fa ilay fomba ratsy mihitsy. Misy mantsy ireo mikasa hividy ny safidin’ireo mpandatsa-bato. Ao kosa ireo mampiasa ny fahefana eo am-pelatanany ka manao teritery sy tsindry amin’ny fomba hita maso sy amin’ny endriny hafa, hanerena ireo filohan’ny ligy hifidy azy ireo. Misy kosa ireo manao fanambatambazana amin’ny endrika samihafa toy ny fitsidihana ireo filohan’ny ligy any amin’ny hotely misy azy, na fitondrana azy ireo amin’ny fiara mihazo an’i Toliara. Nazava anefa ny tenin-dramatoa filohan’ny “comité de normalisation” fa hihatra amin’izay manaotao foana na minia mandika ireo lalàna ny sazy fa tsy hijerena tavan’olona.Afaka manantena izany ny rehetra fa hizotra antsakany sy andavany ity fifidianana, hotanterahina any Ifaty Toliara, ity, ny asabotsy 24 aogositra ho avy izao. TompondakaL’article Kitra – Fifidianana filohan’ny federasiona: manjaka ny resa-bola sy ny teritery a été récupéré chez Newsmada.
KMF/Cnoe: “Tsara sokafana indray ny lisi-pifidianana”
“Tsara ny hanokafana indray ny lisi-pifidianana, ary hatsaraina indray mandeha. Satria mandra-pahatonga ny fifidianana kaominaly, be dia be ny tanora vaovao ampy taona. Mbola azo atao hatrany ny manatsara sy ny manadio lisi-pifidianana” hoy ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina.Anisan’ny fototry ny fifidianana iray manontolo ny lisi-pifidianana: rehefa madio ny lisi-pifidianana, mihena ny hosoka. Na tsy azo 100% aza izay, tsy maninona fa manaiky ny 100% ary manakaiky ny 0% ny mety hisian’ny hosoka. Mila hatevenina koa ny fahaizan’ireo mpikamban’ny birao fandatsaham-bato amin’ny rantsa-mangaikan’ny Ceni. Misy olona efa hita nanao hadalana, tokony hoesorin’ny Ceni, soloiny ary hofaninana ny ekipa vaovao.Mila hatsaraina ny olon’ny Ceni sy ny rantsa-mangaikany amin’ny fifehezana ny fifidianana. Tokony ho roa andro, ohatra, ny fanofanana ny mpikamban’ny birao fandatsaham-bato. Lasa ratsy ny kalitaon’ny fahaiza-manao amin’izany. “Tokony hanamafy ny seraserany ny Ceni hananan’ny olona fitokisana azy”, hoy izy.R.Nd. L’article KMF/Cnoe: “Tsara sokafana indray ny lisi-pifidianana” a été récupéré chez Newsmada.
Tsipy kanetibe: mitaky ny fialan’ny federasiona ireo ligy
Izao vao vaky am-batolampy ny olana eo amin’ny tontolon’ny tsipy kanetibe malagasy. Misavorovoro mantsy ireo ligim-paritra sy ny komity mpitantana eo anivon’ny federasiona malagasin’ny tsipy kanetibe (FMP). Araka izany, mitaky ny fametraham-pialan’ny filohan’ny federasiona sy ireo ekipany ireo ligim-paritra. Betsaka ny anton’izao fitakiana ataon’ireo ligim-paritra ireo izao. Teo aloha ny tsy fisian’ny vokatra teo amin’ny ekipam-pirenena, tena nanala baraka an’i Madagasikara. Anisan’ny goavana amin’ireny ny faharesen’ny ekipa lehilahy, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, notanterahina tany Kanadà, ka nandresen’i Alemaina an’i Madagasikara, tompon’ny anaram-boninanihitra farany, tamin’ny isa tsy noeritreretina, 13 no ho 1. Teo koa ny nahalavo an’i Madagasikara, teo amin’ny famaranana, niadiana ny “Masters 2018”, natao tany Frantsa. Ankoatra izay, misy tsy mazava ny fifantenana ireo mpilalao mandrafitra ny ekipam-pirenena miatrika ireo fifaninanana isan-tokony, any ivelany. Ny fitsabahan’ny federasiona amin’ny lafiny teknika ka tsy manome toerana ny mpanazatra nasionaly. Vokatr’izay, mangataka amin’ny federasiona ihany koa ny tale teknika nasionaly hanala azy amin’ny toerany. Tompondaka
« Kred hafa mihitsy ! ». Io ny tolotra iray ao amin’ny BNI Madagascar natokana ho an’ny fandraharahana tena madinika sy orinasa madinika sy salantsalany. Nampahalala bebe kokoa momba ny ao amin’ny BNI ny amin’ny fanaparihana ny tolotra Kred.Tsy mora ny fampidirana olona ao anatin’ny fandraharahana ara-dalàna, afa-miatrika ny fifaninanana, ao anatin’ny fiovan’ny tontolon’ny toekarena sy sosialy eto amin’ny firenena. Koa manampy ny rehetra amin’izany ny tolotra Kred, hampihodina ny lalam-piharian’ireo orinasa madinika amin’ny fanampiana azy ireny ara-bola.« Any amin’ireo mpanjifa no misy anay », hoy i Zafindratsilikana Bernardin, mpitantana ny tolotra Kred. Mihaona mivantana amin’ny mpanjifa eny ifotony ny ekipa misahana izany, mampahafantatra ny tolotra sahaza azy ireo sy ny fampanantenana azy ireo hahazo valiny haingana amin’izay fangatahana atao. Ampiharana ny fomba fiasa ny teknolojian’ny fifandraisana ankehitriny, hanangonana ny fangatahana rehetra hatrany amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra farany. Miara-miasa amin’ny BNI amin’izany ny Telma amin’ny alalan’ny MVola.Nanatrika ny fanazavana ny minisitry ny Toekarena sy ny tetibola, Randriamandrato Richard ; minisitry ny Indostria, varotra sy ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa, sy ireo mpiara-miombon’antoka hafa.Maro no miandry valiny amin’ny FiharianaTafiditra ao anatin’izany ny fanatanterahana ny tetikasan’ny fitondram-panjakana, Fihariana, iarahana amin’ny BNI. Nandray voalohany ny tetikasa Fihariana ny faritra Vakinankaratra, ho an’ireo mpamboly sy mpiompy ombivavy beronono ao Andranomanelatra. Nanamarika ny fotoana ny fanoloran’ny filoha Rajoelina ny famatsiam-bola ho azy ireo, niaraka tamin’ireo delagasiona Kred/BNI sy ny Socolait. Marihina fa anarivony maro ny antontan-taratasy miandry valiny amin’ny fangatahana ity Fihariana ity. “Ezahina ny hanafainganana ny asa rehetra iarahana amin‘ireo mpiara-miombon’antoka hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa, fa tsy mijanona eo ihany ny tombontsoa ho azy ireo, tahan’ny zana-bola 4 %, mora no ho ny an’ny mpifaninanana hafa”, hoy Rakotosamizanany Dolly, iray amin’ireo mpiandraikitra ny Kred ihany. Natao indrindra ity tolotra ity hanosehana ireo lalam-pihariana tsy ampy tosika manerana ny Nosy sy hamoronana asa. R.MathieuL’article Tolotra Kred – BNI: atao hampihodina ny lalam-pihariana madinika a été récupéré chez Newsmada.
Fivoriana manokana: handinika ny lalàna mifehy ny mpanohitra ny Antenimiera
Tsy ankiandriandry. Tapaka tao anatin’ny filankevitry ny minisitra, omaly, ny fandraisana ny didim-panjakana fampiantsoana fivoriana manokan’ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona. Hanomboka ny 12 aogositra izao izany ary haharitra 12 andro. Anisan’ny lahadinika amin’izany ny fandaniana ny fitsipika anatiny mifehy ny Antenimierampirenena. Eo koa ny fandinihana ny tolo-dàlana momba ny lalàna mifehy ny antoko mpanohitra ary ny fampahafantaran’ny governemanta ny politika ankapoben’ny fitondram-panjakana (PGE). Handinika izany koa ny ho lahadinika etsy Anosikely.Tsiahivina fa efa naneho ny heviny momba io lalàna mifehy na ny satan’ny mpanohitra io ny eo anivon’ny HCC tamin’ny fotoan’androny ary nilaza fa misy banga na tsy ampy izany lalàna izany. Nampanahirana ny nampiharana azy tamin’ny fitondrana teo aloha. Anisan’ny antony namerenana ny handinihan’ny Antenimiera roa tonta io lalàna io izany.Synèse R. L’article Fivoriana manokana: handinika ny lalàna mifehy ny mpanohitra ny Antenimiera a été récupéré chez Newsmada.
Depiote Anyah: « Velirano koa ny sakafo… »
Tsy afaka ny hitazam-potsiny. “Velirano nataon’ny filoha Rajoelina ny hisakafoanan’ny vahoaka malagasy ara-dalàna”, hoy ny depiote voafidy etsy amin’ny boriborintany III, Anyah, omaly. Namaly ny hetahetan’ireo tompon’andraikitra sy ny ray aman-drenin’ny mpianatra amin’ny EPP miisa 13 eny an-toerana ny tenany ka nanatanteraka ilay tetikasa “Tohan’aina” . Nihena ny taham-pahavitrihan’ireo mpianatra. Nilatsaka ambany koa ny taham-pahaizan’ireo ankizy. Hany mba nahazo naoty tsara eo amin’ny kilasy fahafito ny12%-n’ny mpianatra amin’ireo EPP. Anisan’ny anton’izany ny tsy fanjariana ara-tsakafo mianjady amin’ireo ankizy mpianatra. Miantoka ny fahazotoan’ny saina sy ny vatana izany. Araka izany, tetikasa natao hiantohana ny tohan’aina ho an’ireo ankizy indroa ao anatin’ny herinandro iray izao tanterahin’ny depiote Anyah izao. Hitohy hatrany amin’ny andro hanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE izany. “Tanjona apetraka ao anatin’ny tetikasa “tohan’aina” ity ny hampiakarana ny taham-pahavitrihan’ireo mpianatra hianatra, indrindra amin’izao fotoana ankatoky ny fotoam-panadinana izao. Hampiakatra koa ny tahan’ny mpianatra afa-panadinana. Hoezahina haparitaka ho an’ny kilasy rehetra ary hihitatra hatrany amin’ny CEG, ho an’ireo hanala ny fanadinana Bepc izany”, hoy ihany ny depiote.Synèse R. L’article Depiote Anyah: « Velirano koa ny sakafo… » a été récupéré chez Newsmada.